Uyifumana njani i-PC yakho yedesktop kwiLaptop yakho eneDesktop ekude
Ungangena kwi-PC yakho yedesktop kwiLaptop yakho eneDesktop ekude. Idesktop ekude ikuvumela ukuba usebenze kwiLaptop yakho ngokungathi ikhompyuter yakho. Ukufikelela kwikhompyuter ekude kwi-laptop yakho, landela la manyathelo:
ipilisi emhlophe v 4810
1Ukusuka kwimenyu yokuQala, khetha Zonke iiNkqubo → Izinto ezincedisayo → Unxibelelwano lweDesktop ekude.
Ibhokisi yencoko yebhokisi yencoko yeDesktop ekude iyavela.
MbiniUkuba ikhomputha ofuna ukunxibelelana nayo iyafumaneka kuluhlu olwehlayo, khetha. Ngaphandle koko, chwetheza igama lekhompyuter.
Ikhompyuter kufuneka ukuba sele iqalile ukwamkela uqhagamshelo lwedesktop ekude.
3Cofa iqhosha lokuQhagamshela.
Kuya kufuneka ungene kwikhompyuter ekude usebenzisa iakhawunti kuloo khompyuter.
Ngaba ungasela kwimixholo yoxinzelelo
4Kwiwindow yezokhuseleko, chwetheza igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha.
Landela inkqubo efanayo njengoko uza kungena kwenye ikhompyuter.
Linda imizuzwana embalwa. Ekugqibeleni, isikrini selaptop siyatshintsha. Into oyibonayo ibonisiwe yenye ikhompyutha yedesktop.
6Sebenzisa ikhomputha ekude
Xa i-desktop ekude isetiwe kwaye ixhunyiwe, into oyibonayo kwiscreen sekhompyuter yakho ngumboniso wenye ikhompyuter kwinethiwekhi. Ukuhambisa imouse kwikhompyuter yakho kushukumisa imouse kwenye ikhompyuter, kunye neseti yebhodi yezitshixo. Kunjengokuba uhleli kule khompyuter, xa usebenza izinto kude nendawo ekude.
7Ukophula uqhagamshelo, cofa iqhosha le-X kumgca ophezulu kwesikrini.
8Cofa KULUNGILE ukuqinisekisa ukunqunyulwa.
Unxibelelwano luphukile, kwaye usebenzisa iPC yakho kuphela kwakhona.
Iipilisi ezingama-48 11 v
iziphumo ebezingalindelekanga ze-amoxicillin 500mg
neziphumo ebezingalindelekanga ezinqamlezileyo
yintoni idatha yeapp
zingaphi mg yi-xanax bar
iithroo zeethebhu zezinja
tamsulosin hcl 0.4mg ikepusi